Kedụ ka ụka si eme omume mgbasa ozi? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Mina Del Nunzio - Machị 2, 2021
Olee otú chiesa imegide etiti? Communicationzọ nkwukọrịta dị ezigbo mkpa maka ọha mmadụ, yabụ maka ụkpụrụ omume mmekọrịta Katọlik. Kemgbe Vatican Council na ọ kachasị na nkuzi nke Pope John Paul II na akaebe nke omume ya n'ebe ndị nta akụkọ na ndị nkwukọrịta nọ, Churchka gosipụtara ezigbo echiche ya gbasara ndị mgbasa ozi.
N'otu oge ahụ, ọ na-arịọ maka nghọta mgbe niile, ebe ọ bụ na "ọbụna ụwa nke mgbasa ozi chọrọ mgbapụta nke Kraịst". Anyị nwere ike ikwu maka a'ụkpụrụ omume nke mgbasa ozi? Wouldnye ka ọ ga-abụ dịịrị? N'ihe banyere okwu gbasara usoro mgbasa ozi, ụlọ ụka na-elekwasị anya na ndị na-arụ ọrụ mgbasa ozi karịa "ngwaọrụ" nke nkwurịta okwu elekọta mmadụ.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ikwu banyere omume naanị mgbe nnwere onwe ịhọrọ gụnyere; ya mere na ọ bụghị ngwá ọrụ, mana ihe ndị mmadụ na-eme n'ime ha bụ isi ụkpụrụ gbasara nchegbu. N'ihi ya, anyị nwere ike ikwu maka ọrụ omume dị iche iche: ndị na-emepụta ihe mgbasa ozi - dị ka ndị nta akụkọ, ndị na-ede ihe nkiri, ndị nduzi, ndị na-ese foto, ndị editọ, wdg: kamakwa ndị nwe nkezi; ndị isi obodo; na kwa ọrụ dịịrị ndị ọrụ mgbasa ozi. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-ekwu maka "nkezi " ime nke a ma ọ bụ nke ahụ abụghị ikike na-enweghị isi nke okike karịrị ikike mmadụ.
Olee otú chiesa n'ime atụnyere nke etiti? Chọọchị na-akwalite libertà di parola? Ee: Chọọchị na-akwado nnwere onwe ikwu okwu, nke nwere njikọ chiri anya na nnwere onwe nke okpukperechi. Ọ bụrụ na otu enweghị onye nke ọzọ, ha na-aghọ ihe enweghị isi, nnwere onwe nkịtị na nke pụtara ìhè. Ma nnwere onwe ikwu okwu na nnwere onwe okpukpe na-eyi ọha mmadụ egwu taa, nke ka nke ndị na-emebiga ihe ókè n'okpukpe na ịghara ịnabata echiche iyi ihe. Enwere ikike ikwu okwu n'efu? Dị ka e kwuworo maka nnwere onwe okpukpe na nke akọ na uche, “ókè a kpaara ókè nke nnwere onwe okpukpe.
Kedu ka ụka si eme omume na mgbasa ozi na netwọkụ mmekọrịta?
Gini mere ndi mmadu ji di iche na ndi ozo nkwurịta okwu? Mgbasa mgbasa ozi na teknụzụ ọhụrụ ndị ọzọ na-eweta nsogbu ọhụrụ nye ọdịbendị mmadụ ka ha na-akpụzi mmekọrịta onwe ha ma na-agbanwe mmekọrịta ezinụlọ na mmekọrịta mmekọrịta: Taa, mgbasa ozi ọgbara ọhụrụ, nke bụ akụkụ dị mkpa nke ọkachasị ndụ ndị mmadụ. giovani, ha nwere ike bụrụ ihe enyemaka na ihe na-egbochi nkwukọrịta n’ime na n’etiti ezinụlọ
Lọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike ịbụ ihe mgbochi ma ọ bụrụ na ha abụrụ ụzọ iji zere ị listeninga ntị na ndị ọzọ, izere kọntaktị anụ ahụ, iji jupụta oge ọ bụla ịgbachi nkịtị na izu ike, iji chefuo na "ịgbachi nkịtị bụ ihe dị mkpa nke nkwurịta okwu; na enweghị ya enweghi ike inwe mkpụrụ okwu nwere ọdịnaya ”Ndi bụ okwu Benedict XI. Media nwere ike inye aka na nkwukọrịta mgbe ọ na-enye ndị mmadụ ohere ịkekọrịta akụkọ ha, na-akpọtụrụ ndị enyi dị anya, kelee ndị ọzọ ma ọ bụ jụọ nke ha. perdono na imeghe uzo nye ndi ohuru ohuru. Dika anyi n’eto eto kwa ubochi n’amaghi oke nkpa izute ndi ozo, anyi g’eji nkà na ụzụ jiri amamihe, kama ikwe ka ọ na-achịkwa anyị. Leekwa m nne na nna ha bụ ndị isi nkuzi, mana enweghị ike ịhapụ ha onwe ha.
Don Riccardo Ceccobelli onye ụkọchukwu na ịhụnanya
Na Philippines, amachibidoro rosaries na ihe oyiyi dị nsọ n'ụgbọala
Rosalia Lombardo hụrụ ozu ahụ n'ọnọdụ zuru oke
Ọ na-egbu nwa ya nwoke dị afọ 3 wee dọwaa nne ya, Giulia Stanganini ga-aza maka ogbugbu abụọ
Akaebe "Agwara m satan ọtụtụ ugboro"
Spain na-akwado iwu banyere euthanasia
Tweet si Elton John na-awakpo Vatican na mmekọ nwoke na nwoke